Ukuphupha iLeming Discover ▷️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
IiMemings ziimpuku ezincinci ezinxulumene nempuku. Bahlala ikakhulu kwimimandla esemantla ebandayo, kodwa banokugcinwa njengezilwanyana zasekhaya.
Njengezinye izilwanyana ezininzi kunye neentlobo zezilwanyana, iilimings zinokubonakala njengeempawu kwiiphupha zethu. Kwenzeka ukuba kwimeko yamaphupha sibona i-lemming isebenza phambi kwethu. Ngamanye amaxesha siyakwazi nokubamba intaka encinci. Amaphupha amnandi kancinci kule meko ngokuqinisekileyo abandakanya lawo apho kubonwa ulwazelelelo olufileyo. Nangona kunjalo, la maphupha kufuneka athathwe ngokungathandabuzekiyo, kuba ukukhawulezisa kuhlala kunentsingiselo yokomfuziselo, evumela izigqibo ezininzi ngathi nangobomi bethu. Kodwa ichazwa njani ngoku?
1 Uphawu lwephupha «iLemming» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «uLimming» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «uLimming» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iLemming» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuqhayisa kunokuhlala kuvula ephupheni. Iingxaki y Ukuphazamiseka Iingoma. Oku kuyamongamela umntu ochaphazelekayo kubomi bemihla ngemihla. Mhlawumbi unokude ube nemvakalelo yokuba amaxhala akhulayo ngokuthe ngcembe akuhlutha amandla akho.
Ngokuqhelekileyo kukholelwa ukuba ukubona i-lemming kuyabakhuthaza ukuba bahlale benengqondo ecacileyo kwaye bajongane neengxaki ezicinga kakuhle. Ukuba iphupha ngoku liziphatha ngokweemvakalelo, awusayi kuphinda ubenako ukuqonda isiphithiphithi esiphumela ebomini bakho kunye nezinto ezisongelayo ukukhula phezu kwentloko yakho.
Isimboli selemming sitolikwa ngendlela elungileyo xa iqela elinomdla likwazi ukubamba enye yeempuku ephupheni. Kule meko, ujongene nobunzima kubomi bokwenyani, kodwa iphupha lithembisa ukuba kungekudala. ukuphuculwa. Iingxaki zanamhlanje azihlali ixesha elide. Eli nqanaba lidinisayo linokoyiswa kungekudala. Ukongeza, kungekudala kuzakubakho inkqubela phambili entle kwezorhwebo nakwezemali.
Imilem efileyo ikwalatha kutoliko lwamaphupha ngokubanzi. Iintshaba. Abanye abantu abalahlekanga kakuhle kumntu ochaphazelekayo. Banokude bacwangcise iyelenqe lokulalela. Nangona kunjalo, umntu kufuneka ahlale ezolile: uphawu lwe-lemming efileyo luthembisa ukusilela kokugqibela kwezicwangciso zotshaba.
Uphawu lwephupha «uLimming» - ukutolikwa kwengqondo
Isampulu yolwamkelo ngokwendlela yokutolika kwengqondo ukungalingani kwangaphakathi phakathi. Iphupha alihambelani nesiqu salo, ke linokuba yinkxalabo ngokubhekisele kuphuhliso oluthile kubomi bokwenyani. Ingxaki inokubakho kubume bobuntu: ngokwee-psychoanalysts, abo baphupha i-lemming bahlala benengxaki yokuzithemba nokuzithemba.
Kule meko, kunokucetyiswa ukuba uphonononge ngakumbi izizathu zokungalingani kwengqondo ngoncedo lweengcali. Ngenye indlela, umphuphi kufuneka okungenani acinge ngokuthemba izihlobo okanye usapho kwaye acele inkxaso kule meko.
Uphawu lwephupha «uLimming» - ukutolika kokomoya
Kutoliko lamaphupha okomoya, ulwamkelo luphawu ukusetyenziswa kakhulu kokutya kunye neemfuno zethuku.